Jurgen Klopp Oo Ka Hadlay Ciyaarta Manchester United Ee Axadda, Xalaadda Dhaawacyada Laacibiintiisa Iyo Sida Uu Iskugu Diyaarinayo Solskjaer | Laacib.net
January 14, 2020 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO" 2
Liverpool waxay rajaynaysaa inay dib u hesho ciyaaryahannadeeeda dhaawaca ah ka hor kulanka Axadda ay ku martigelinayaan Manchester United, kaas oo ay uga baahan tahay guul si ay usii wadato rikoodhkeeda cajiibka ah iyo hammiga ah in iyadoo aan laga adkaanin ay ku guuleysato horyaalka Premier league xili ciyaareedkan.
Kooxda tababare Klopp ayaa Axadda qaabili doonta United oo ah kooxda kaliya ee barbarraha la gashay xili ciyaareedkan, taas oo kusoo beegantay maalmo kooban kaddib markii ay Reds 1-0 dirqi ah kaga soo adkaatay Tottenham oo bandhig madax-xanuun ah ku qaabishay.
Liverpool waxa kulankan usoo noqon doona laacibka khadka dhexe ee Fabinho oo garoomada ka maqnaa tan iyo November 27 oo uu ku dhaawacmay ciyaar 1-1 ku dhamaatay oo Napoli ay wada ciyaareen, sidoo kalena waxa tababarka kusoo noqday labada daafac ee Joel Matip iyo Dejan Lovren, hase yeeshee waxa weli bannaanka sii ahaan doona Naby Keita iyo James Milner.
Tababare Jurgen Klopp oo u warramay website-ka Liverpool, ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dhaawacyada ciyaartoygiisa iyo laacibiinta soo laaban doona ka hor kulanka Man United, waxaanu yidhi: “Runtii waxaan sugayay inta ay garoomada kusoo laabanayaan ee uu qof ii sheegayo in loo ogolaaday inay si buuxda tababarka u qaadan karayaan.
“Waxay u egtahay, in Joel uu ku jiri doono, sidoo kalena Fabinho ayaa laga yaabaa inuu yimaaddo maalinta xigta mase hubo. Dejan, waxa suurtogal ah inuu sidoo kale yimaaddo.”
Tababare Klopp waxa kale oo uu ka hadlay waxa ay dadku ka filayaan ciyaarta Manchester United ee Axadda, waxaanu yidhi: “Kulanka Axadda aanu kaga hor tegayno United, dhamaanteen waynu ognahay waxa ay dadku naga filayaan. Waxay noqon doontaa ciyaar weyn, waxaananu isku dayi doonaa inaanu diyaar u noqono.”
Miyuu Fabinho Diyaar U Noqon Karaa Kulanka Manchester United? Liverpool Oo War Ka Heshay Xaaladda Dhaawaca Xiddiga Reer Brazil.
2 responses to “Jurgen Klopp Oo Ka Hadlay Ciyaarta Manchester United Ee Axadda, Xalaadda Dhaawacyada Laacibiintiisa Iyo Sida Uu Iskugu Diyaarinayo Solskjaer”
Waa ka badinerna united mana naga hor istaageso guulaheena insha allah viva luverpool
Niga horta taageero liverpool mahi lkin waxan darami kara waxa mesha ee u socdaan Man city ka awood badan man unitid kana qibrad badan saacaan ayaa indhahoda oo shanta ah lakala diray